रातका पतिहरू | मझेरी डट कम
एकाएक सडकमा छाएको चकमन्नताले लुनालाई कताकता शून्य लाग्छ। केही दिन अगाडिदेखि नै सडकनजिकैका घर थर्काउने खालको लाटीको आवाज कसैले सुन्न पाएका हुँदैनन्। लाटीका विषयमा भन्नुपर्दा, लाटीलाई परासी बजारमा सबैले चिन्छन्। प्रत्येक मान्छे ऊसँग परिचित छन्; कोही अपरिचित छैनन्। मानौँ सडक उसको पेवा नै हो। सधैँ सडकमा हे... हे... र ऐ... ऐ.... गर्दै चिच्याउने उसको आवाज कसैले थुन्न सकेका छैनन्। ऊ कान नै नसुन्नेचाहिँ होइन। कसैले ऐ भनेर बोलायो भने ऐ को प्रतिउत्तर ‘ऐ’मै दिन्छे। लाटीको अतित भने गर्भमै छ। कोही भन्छन्— ‘‘लाटीका बाबुआमाले नै लठ्यौरी छोरी बोझ ठानी सडकमा फ्याँकिदिएका हुन्।’’ कोही भन्छन्— ‘‘लाटीको बाबुआमा मरिसके।’’ वास्तविकतासँग सबै अनभिज्ञ छन्। उसको वर्तमान भने सबैकोसामु छर्लङ्ग छ। कसैलाई उसको वर्तमान केवल रमिता भएको छ। कसैकसैको मुटु उसलाई देख्दा नराम्रोसित कटक्क दुख्छ पनि।
जब रात छिप्पिँदै जान्छ लाटीसामु चुरा, पोते र सिँदुर लिएका पति भनाउँदाहरू लाटीलाई फकाउन पुग्छन्। लाटीले दिउँसो बाटोमा किन नबोलेको त भनेर शरीर छुन नदिँदा भोलिदेखि बोल्ने कसम खाँदै कान समाउँछन्। लाटी सधैँझैँ उनीहरूको बनावटी कुरालाई विश्वास गर्छे। त्यो अबोधलाई छक्काउँदै प्यास मेट्न पाएकोमा गर्व गर्छन् ती नराधमहरू.....।
एक दिन साँझपख निरुता हाँस्दै लुनासामु आएर भन्छिन्— ‘‘दिदी, आज हामी सबैलाई लाटीले तीन छक पारी नि ! सधैँ लोग्ने देखाइदेभन्दा त पख पख भन्दै बाटोभरि आँखा बिछ्याउँथी। लोग्नेहरू देखेपछि खुसी हुँदै चिच्याउँथी। लोग्नेहरूले टाढैबाट कुलेलाम ठोकेपछि निराश हुन्थी र म भोलि लोग्ने देखाइदिउँला भन्ने इसारा गर्दै बाटो लाग्थी। आज त क्षितिजलाई देखाउँदै त्यही मेरो लोग्ने हो भनेर इसारा गरी। हामीले ठूलो सर होला भन्यौ। उसले होइन भन्दै मुन्टो हल्लाई बाबा... बाबा... भन्दै हातले क्षितिजको नाप देखाई। त्यतिमात्र कहाँ हो र ! ऊ भक्कानो छोडेर रोई। ऊ त्यस्तरी रोएको हामीले पहिलो पल्ट देख्यौँ। बाबा हो... बाबा हो मेरो लोग्ने बाबा हो। उसले केही शब्दमा त केही इसारामा निर्धक्कसँग क्षितिज बाबुलाई लोग्ने घोषणा गर्दै गर्वले छाती पिट्दै हिँडी। हामी सबैले चित खायौँ सायद लाटी अब बौलाही छ क्यारे।”